Nigeria Oo Laga Nadiifiyay Cudurka Ebola | Somaliland Today
← “Maayarka Iyo Ku Xigeenkiisa, Ha Laga Daayo Xag-xagashada” Caaqil Afey
Wasiirada Yurub Oo Ka Shiraya Halista Ebola →
Nigeria Oo Laga Nadiifiyay Cudurka Ebola
(SLT-Nigeria)-In kasta uu cudurka Ebola, uu fara ba’an ku hayo dalalka Sierra Leone, Liberia iyo Guinea, ayaa maanta waxa ay maalin weyn u tahay wadanka Nigeria.
Hay’ada caafimaadka aduunka ee WHO ayaa maanta lagu wadaa in ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo in cudurka Ebola haatan uusan ka jirin dalka Nigeria, oo muddo 6 todobaad ah aanan lagu arkin kiisaska cudurkaasi.
Bishii July ayaa dalkaasi waxa ka jiray walaac weyn, kaddib markii diblumaasi Liberian ah oo qaba cudurkaasi uu tagay dalkaasi Nigeria.
Dalkaasi ayaa waxaa cudurkan ugu dhintay 8 qof halka kiisaska lagu arkayna ay ahaayeen 20-kiis.
Walaacii laga qabay in cudurkan uu ku faafo dalkan ballaran oo ay ku noolyihiin 170 milyan ee qof ayaa hadda laga hortagay. Balse khubarada caafimaadka ayaa ka digaya in dalka Nigeria uu weli u baahan yahay in uu aad ugu diyaar garoobo haddii uu soo noqdo Ebola, oo ay tahay mid suuragal ah.
Bishii July markii nin Liberian ah oo qabo cudurkaasi uu tagay magaalada Lagos, dalka ma uusan u diyaarsaneyn cudurkaasi, balse iyaga oo kaashanaya gargaar kaga yimi caalamka ayaa waxa ay sameeyeen jawaab celin aad u wanaagsan.
Ku dhawaad 900 oo qof oo suuragal ay aheyd in cudurka ay qaadeen ayaa xaalkooda si dhaw loola socday.
Doctor Stella Ameyo Adadevoh ayaa dalkeeda Nigeria abaal badan u gashay, kaddib markii ay cudurka ka heshay diblumaasigii Liberia u dhashay ayna xaqiijisay in la karantiilo.
Dhakhtaradaasi iyo todoba qof oo kale oo uu ka mid yahay diblumaasiga ayaa Nigeria ugu dhintay cudurka Ebola.
Dadaalka Nigeria ayaa u muuqda mid mira dhalay, balse dagaalka lagula jiro Ebola ee wadankaasi weli ma dhamaan.